မျက်လုံး အမြင်အာရုံ ပြန်ကောင်းလာစေဖို့ လွယ်ကူတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း (၁၁)ခု – May Sharing
မျက်လုံး အမြင်အာရုံ ပြန်ကောင်းလာ စေဖို့ လွယ်လွယ်ကူကူ လေ့ကျင့်ခန်း (၁၁)ခု
နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း စာတွေဖတ်တဲ့ အခါ၊ ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပြူတာတွေကို အသုံးများတဲ့ အခါ မျက်လုံးညောင်းလာ ပါတယ် … ။ မျက်လုံး နီရဲလာတာ၊ အမြင်မှုန် ဝါးလာတာ၊ မျက်ရိုး ကိုက်လာတာက မျက်လုံးအားစိုက်မှု လွန်တဲ့ အခါ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတွေ ပါပဲ။ တခါတရံမှာ မျက်လုံးကို အနားပေးပြီး မျက်လုံး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် …. ။
1.2မိနစ်ခန့်ကြာ မျက်တောင်ကို မြန်မြန်ခတ်ပေးပါ …. ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက မျက်လုံးရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတက်စေ ပါတယ် … ။
2.ပြူတင်းပေါက်မှန်ပေါ်မှာ အစက်တစ်စက်ကို ဆွဲထားပါ …… ။ ပြူတင်းပေါက် အပြင်က အရာဝတ္ထု တစ်ခုကို စက္ကန့်အနည်းငယ် ကြာအောင်ကြည့်ပါ …. ။ ပြီးရင် ပြူတင်းပေါက်ပေါ်က အစက်ကို ပြန်ကြည့်ပါ …. ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ ငါးကြိမ် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အခါ အမြင်အာရုံ တိုးတက်လာ ပါတယ် …. ။
3.ခါးမတ်မတ်ထိုင်ပြီး မျက်လုံးကို5စက္ကန့်လောက် မှိတ်ထားပါ ….. ။ ပြီးရင် မျက်လုံးကို အကျယ်ကြီးပြူးလိုက်ပါ … ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို 8ကြိမ်ကနေ 10 ကြိမ် အထိ ပြုလုပ်ပေးပါ …. ။ အဲဒီအခါ မျက်လုံးကြွက်သားတွေက သန်မာလာပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းလာပါတယ် ….. ။ မျက်လုံး ကိုလည်း အနားပေးပြီးသား ဖြစ်သွားစေ ပါတယ် … ။
4. မျက်လုံးကို မိနစ် အနည်းငယ် ကြာအောင် မှိတ်ထားပြီး သာယာတဲ့ ရှုခင်းတွေကို စိတ်ထဲမှာ ပုံဖော်ကြည့်ပါ ….. ။ လက်နှစ်ဖက်လုံးကို နွေးလာအောင် ပွတ်ပြီး မျက်လုံးကို အုပ်လိုက်ပါ …… ။ တစ်မိနစ်လောက်ကြာမှ မျက်လုံးကို ပြန်ဖွင့်ပါ …. ။
5.လက်ချောင်းလေး တွေကို သုံးပြီး မျက်လုံးကို ညင်ညင် သာသာ နှိပ်ပေးခြင်းက မျက်လုံးရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကို တိုးတက်စေ ပါတယ် ….. ။
6. မျက်လုံးကို တစ်နေ့နှစ်ခါ ရေနဲ့ ပွတ်သပ်ပေးပါ။ မနက်မှာ ရေနွေးနဲ့ အရင်သစ်ပြီး ရေအေးနဲ့ ပြန်သစ်ပါ။ ညနေဘက်မှာ ရေအေးနဲ့ အရင်သစ်ပြီး ရေနွေးနဲ့ ပြန်သစ်ပါ …. ။
7.လက်ဝါးကို မျက်နှာရှေ့မှာ ဖြန့်ထားပြီး လက်မကို စိုက်ကြည့်ပါ။ လက်ကို မျက်နှာနဲ့ နီးအောင် လုပ်လိုက်၊ ဝေးအောင် လုပ်လိုက်နဲ့ 10 ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ ….. ။
8.မျက်လုံးကို5စက္ကန့် ကြာအောင် အားနဲ့ အတင်းပိတ်ထားပါ။ ပြီးရင် မျက်လုံးကို မြန်မြန် ပြန်ဖွင့်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်ခါလုပ်ရင် 10 ကြိမ် ပြုလုပ်တဲ့ အခါ မျက်လုံး ညောင်းသက်သာ သွားပါတယ် ……. ။
9.မျက်လုံးကို စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန် ဖြည်းဖြည်း လှည့်ပါ။ နာရီလက်တံ အတည့် အတိုင်း4ကြိမ် လှည့်ပြီး နာရီလက်တံ ပြောင်းပြန် အတိုင်း4ကြိမ် လှည့်ပါ ….. ။
10. မျက်လုံးကို ဘယ်ဘက် ကနေ ညာဘက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွေ့ပြီး ညာဘက် ကနေ ဘယ်ဘက်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွေ့ကြည့်ပါ ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့6ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ အခါ မျက်လုံးအနားရပြီးသား ဖြစ်စေ ပါတယ် ….. ။
11.အလယ်မှတ်ကနေ စပြီးတော့ မြားပြထားတဲ့ အတိုင်း လိုက်ပြီး ကြည့်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို3ကြိမ် ပြုလုပ်ပေးပါ ….. ။
နတေို့ငျးနတေို့ငျး စာတှဖေတျတဲ့ အခါ၊ ဖုနျးတှေ၊ ကှနျပွူတာတှကေို အသုံးမြားတဲ့ အခါ မကျြလုံးညောငျးလာ ပါတယျ … ။ မကျြလုံး နီရဲလာတာ၊ အမွငျမှုနျ ဝါးလာတာ၊ မကျြရိုး ကိုကျလာတာက မကျြလုံးအားစိုကျမှု လှနျတဲ့ အခါ ဖွဈလာတဲ့ ပွဿနာတှေ ပါပဲ။ တခါတရံမှာ မကျြလုံးကို အနားပေးပွီး မကျြလုံး လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျဖို့ လိုအပျပါတယျ …. ။
1.2မိနဈခနျ့ကွာ မကျြတောငျကို မွနျမွနျခတျပေးပါ …. ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးက မကျြလုံးရဲ့သှေးလညျပတျမှုကို တိုးတကျစေ ပါတယျ … ။
2.ပွူတငျးပေါကျမှနျပျေါမှာ အစကျတဈစကျကို ဆှဲထားပါ …… ။ ပွူတငျးပေါကျ အပွငျက အရာဝတ်ထု တဈခုကို စက်ကနျ့အနညျးငယျ ကွာအောငျကွညျ့ပါ …. ။ ပွီးရငျ ပွူတငျးပေါကျပျေါက အစကျကို ပွနျကွညျ့ပါ …. ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနေ့ ငါးကွိမျ ပွုလုပျပေးတဲ့ အခါ အမွငျအာရုံ တိုးတကျလာ ပါတယျ …. ။
3.ခါးမတျမတျထိုငျပွီး မကျြလုံးကို5စက်ကနျ့လောကျ မှိတျထားပါ ….. ။ ပွီးရငျ မကျြလုံးကို အကယျြကွီးပွူးလိုကျပါ … ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို 8ကွိမျကနေ 10 ကွိမျ အထိ ပွုလုပျပေးပါ …. ။ အဲဒီအခါ မကျြလုံးကွှကျသားတှကေ သနျမာလာပွီး သှေးလညျပတျမှု ကောငျးလာပါတယျ ….. ။ မကျြလုံး ကိုလညျး အနားပေးပွီးသား ဖွဈသှားစေ ပါတယျ … ။
4. မကျြလုံးကို မိနဈ အနညျးငယျ ကွာအောငျ မှိတျထားပွီး သာယာတဲ့ ရှုခငျးတှကေို စိတျထဲမှာ ပုံဖျောကွညျ့ပါ ….. ။ လကျနှဈဖကျလုံးကို နှေးလာအောငျ ပှတျပွီး မကျြလုံးကို အုပျလိုကျပါ …… ။ တဈမိနဈလောကျကွာမှ မကျြလုံးကို ပွနျဖှငျ့ပါ …. ။
5.လကျခြောငျးလေး တှကေို သုံးပွီး မကျြလုံးကို ညငျညငျ သာသာ နှိပျပေးခွငျးက မကျြလုံးရဲ့ သှေးလညျပတျမှုကို တိုးတကျစေ ပါတယျ ….. ။
6. မကျြလုံးကို တဈနနှေ့ဈခါ ရနေဲ့ ပှတျသပျပေးပါ။ မနကျမှာ ရနှေေးနဲ့ အရငျသဈပွီး ရအေေးနဲ့ ပွနျသဈပါ။ ညနဘေကျမှာ ရအေေးနဲ့ အရငျသဈပွီး ရနှေေးနဲ့ ပွနျသဈပါ …. ။
7.လကျဝါးကို မကျြနှာရှမှေ့ာ ဖွနျ့ထားပွီး လကျမကို စိုကျကွညျ့ပါ။ လကျကို မကျြနှာနဲ့ နီးအောငျ လုပျလိုကျ၊ ဝေးအောငျ လုပျလိုကျနဲ့ 10 ကွိမျ ပွုလုပျပေးပါ ….. ။
8.မကျြလုံးကို5စက်ကနျ့ ကွာအောငျ အားနဲ့ အတငျးပိတျထားပါ။ ပွီးရငျ မကျြလုံးကို မွနျမွနျ ပွနျဖှငျ့ပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈခါလုပျရငျ 10 ကွိမျ ပွုလုပျတဲ့ အခါ မကျြလုံး ညောငျးသကျသာ သှားပါတယျ ……. ။
9.မကျြလုံးကို စကျဝိုငျးပုံသဏ်ဍာနျ ဖွညျးဖွညျး လှညျ့ပါ။ နာရီလကျတံ အတညျ့ အတိုငျး4ကွိမျ လှညျ့ပွီး နာရီလကျတံ ပွောငျးပွနျ အတိုငျး4ကွိမျ လှညျ့ပါ ….. ။
10. မကျြလုံးကို ဘယျဘကျ ကနေ ညာဘကျကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ရှပွေီ့း ညာဘကျ ကနေ ဘယျဘကျကို ဖွညျးဖွညျးခငျြး ရှကွေ့ညျ့ပါ ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို တဈနေ့6ကွိမျ ပွုလုပျပေးတဲ့ အခါ မကျြလုံးအနားရပွီးသား ဖွဈစေ ပါတယျ ….. ။
11.အလယျမှတျကနေ စပွီးတော့ မွားပွထားတဲ့ အတိုငျး လိုကျပွီး ကွညျ့ပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို3ကွိမျ ပွုလုပျပေးပါ ….. ။
Previous: အဆုပ်တစ်ခြမ်းပျက်စီးသူတောင် ပြန်လည်အသက်လွတ်မြောက်ခဲ့သည်ဟု ပြောပြသော ဆေးနည်း
Next: Facebook သုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ စာတစ်ကြောင်းနဲ့ ထောင် ၃ နှစ်ကျနိုင်သော ၆၆( ဃ )